Uwusebenzisa njani umatshini we-paddy huller kwaye yintoni ekufuneka siyiqwalasele
umatshini wokugaya irayisi Umsebenzi ubaluleke kakhulu kuyo yonke inkqubo yokulungisa irayisi. Ngoku, Makhe sithethe kakhulu ngokubaluleka komatshini wokugaya irayisi.
Umatshini wokugaya irayisi unokuyisusa i-rayisi kunye necandelo elisisiseko lokugaya irayisi. Umbungu welayisi kunye ne-endosperm yelayisi yenziwa ngamagciwane. Kwaye emva kokugaya, inokunceda ukwahlula phakathi kwembungu yelayisi kunye ne-endosperm ukuze kuphuculwe ubuchule bokugaya degermination ukusebenza kakuhle. Ukuba siyayisusa i-rayisi yerayisi, sinokwenza isityalo sokugaya irayisi sivelise iigrasi zerayisi ngaphandle kwengcambu, inencasa engcono. Ngaphandle koko, Umgangatho wesityalo wokugaya irayisi uphuculwe.
ke ukuba uwusebenzisa kanjani umatshini we-paddy huller kwaye yintoni ekufuneka siyiqwalasele?
1. Ngaphambi kokusebenzisa i-paddy huller, Kufuneka kuqala ujonge i-fastener iqinisiwe, icandelo elijikelezayo liyatshintsha, nganye ithwele nayiphi na igrisi, I-husking unit ibekwe kumhlaba ocekeceke.
2.Ngaphambi kokusebenzisa i-paddy huller, Ukuba ujongile ukutshintshelwa kwevolthi kufuneka ubekwindawo engekho.
3.Emva kwemingxunya ye-paddy ukuqala injini, ukujikeleza kwerhoqo nezixhobo kwicala le. Imizuzu embalwa yokuqala idging, ukuqaphela akunangxolo engaqhelekanga, ukuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo, iyakwazi ukondla imveliso.
4. Iipaddy kernels eziqukethe ulusu ukuze ziqokelele, iyakwazi ukuhlengahlengisa ukuhamba komoya kwisivunguvungu, yonyusa umthamo womoya wokubamba, ukwenzela ukuba kufezekiswe injongo yokufunxa ulusu.
5.Ukujonga ngokuthe ngqo ngaphandle kokwahlulahlula imbewu yeenkozo eziqulathwe ngaphaya komgangatho, kufuneka ihlengahlengise i-motor kunye nendawo yokuncamathela kwi-angle, phucula ukusebenza kokukhetha.
6. Imveliso, abantu abavela kwi vibration zemoto kukude, ukuthintela ukwenzakala.
7. Izixhobo kufuneka zihlale zicoca ubumdaka obungaphezulu kwekhusi kunye neenkozo zentsalela kunye nesundries. Ukuze uqiniseke ngesiphumo se-paddy. Izixhobo kufuneka zigqunywe xa zingasetyenziswa, kwindawo eyomileyo kunye neNdyebo, ukunqanda ilanga kunye nemvula.
Khetha ulwimi lwakho EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsWikang FilipinoFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa IndonesiaPortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
Umatshini waseVictor Fama © 2014-2021 Onke Amalungelo Agciniwe.